iMovie gburugburu / ndebiri maka Mac ọrụ e
Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị elu atụmatụ nke iMovie nke na-n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe gburugburu na ndebiri na-ebudatara maka iMovie mere na okirikiri nhọrọ ukwuu na-abụghị nanị zuru okè ma onye ọrụ ọkọkpọhi mmetụta na akara na oru ngo na a na-eme. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ na nke a kwesịkwara ime ka n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe usoro a soro na nke kacha mma na-anapụta ke oge ime ka n'aka na needful na-eme. A nkuzi bụ ihe niile banyere n'elu iMovie gburugburu na ha mmejuputa iwu.
Part 1. Top 20 iMovie gburugburu / ndebiri maka Mac ọrụ
Part 2. Olee otú iji nweta iMovie gburugburu / ndebiri si iDVD
Part 1: Top 20 iMovie gburugburu / ndebiri maka Mac ọrụ
N'okpuru ebe a bụ top 20 iMovie gburugburu maka Mac ọrụ iji jide n'aka na ịma mma nke ha omume-abawanye na oké gbatịrị:
1. Sports isiokwu
Ọ bụ otu n'ime ndị na gburugburu ga-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe echiche na ọ na-haziri karịsịa maka ndị hụrụ ya n'anya egwuregwu. Iji mee ka ndị kasị mma ọrụ nke isiokwu a gwara iji lee anya na YouTube video otu ihe ahụ.
2. Scrapbook isiokwu
Ezie na ọ bụ ike ike na okirikiri nhọrọ ukwuu ma ka ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma gburugburu maka ojiji na-achọ ịhụ ha iMovie ọdịdị si dị iche iche n'akuku. Ọ bụ kpam kpam n'efu na ike ga-ibudatara na iMovie ukara website
Ọzọ na-akpali akpali isiokwu na ga-ahapụ onye ọrụ ogbi dị ka ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na ọkaibe omume nke ga-ekwe ka onye ọrụ na-eji software ọzọ ukwuu karịsịa ma ọ bụrụ na onye ọrụ hụrụ n'anya na-ekiri ozi ọma na ugbu a na-eme.
4. Nkiri warara isiokwu
Ọ bụ ihe kasị mma isiokwu iji jide n'aka na onye ọrụ captures niile ụtọ, na-fun mgbe si na njem na ezinụlọ. Ọ bụkwa otu nke kasị mma gburugburu iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results na nke a mgbe ọ na-abịa égbè fim.
5. Veritas isiokwu
Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị Mmanu gburugburu nke oge a oge na-ele ihe anya bụ dị nnọọ ka a obere toolbar. The buttons nakwa dị ka okirikiri nhọrọ ukwuu bụ ihe kasị mma na ọrụ na-chọrọ iji ihe mfe na-atụ aro iji jide n'aka na isiokwu bụ ebudatara.
6. Rhino isiokwu
Ọ bụ ezie na a onye ọrụ na-achọ na-eme a ọtụtụ ọrụ mgbe wụnye a na isiokwu ma kasị mma na ndị ọkaibe atụmatụ e agbakwunyere n'ime. Ọ na-emekwa n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ezigbo onyenlereanya ahụmahụ na nke a.
Nke a isiokwu dị na ma ìhè na ọchịchịrị na agba na maka otu ihe ahụ ọ ọkụ mkpa na-achọ n'aka nke dị iche iche ọrụ n'ụwa nile. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu gburugburu nke oge a na oge nke na-eme n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma.
Ọ bụ onye nwere ọgụgụ isi isiokwu nke na-eme n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe mmemme ngwá ọrụ na-nyere ka onye ọrụ gbanwee isiokwu dị ka kwa mkpa. The ọchịchịrị na mgbanwe Akara ókwú jide n'aka na ọ na-aghọ ndị kacha oke nke onye ọrụ.
YouTube URL:: https: //www.youtube.com/watch? V = WmA9-M3yn5g
Ọ bụ isiokwu na-karịsịa haziri maka ndị ọrụ chọrọ ha iMovie interface anya mfe ma ọkachamara si akụkụ nile .Nke isiokwu e weere dị ka ihe ndị kasị ebudatara isiokwu nke oge a oge na downloads ebi-amụba.
10. aqua n'Ike Mmụọ Nsọ
Isiokwu na-eme ka n'aka na fim ma ọ bụ ngo mere na iMovie-aghọ ndị kasị mma na-emekwa ka n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe ngwaọrụ na-nyere ka onye ọrụ jikwaa dị iche iche oru ngo na ala na afọ ojuju.
11. Inwu ndụ isiokwu
Ọ bụrụ na onye ọrụ chọrọ ka n'aka na iMovie-aghọ na; na kwa anya yi na nke a ọ na-gwara iji jide n'aka na a na isiokwu ebudatara mere na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe ọrụ agbakwunyere n'ime.
12. Butterfly na okooko osisi
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma gburugburu nke na-n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma aka dabara iMovie nakwa dị ka n'ozuzu okirikiri nhọrọ ukwuu nke nchịkọta akụkọ na-aghọ ihe kasị mma niile oge. Ọ ga-emekwa n'aka na onye ọrụ na-akawanye a ọkachamara anya niile tinyere.
13. School ụbọchị
Icheta ochie na-echeta bụ ihe nke niile ọrụ n'anya ma na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị inwe ya n'ime a na isiokwu nke ga-emekwa ka n'aka na n'ozuzu isiokwu nhọrọ na-aghọ mfe.
14. Photo eruba
Onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na na-eji iMovie dị ka a foto nchịkọta akụkọ a na isiokwu a na-eji jide n'aka na ọrụ na-aghọ mfe na nsonaazụ kacha mma na-enwetara.
15. Album echeta
Ọzọ na-ewere a na isiokwu echiche ga-eme ka onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe isiokwu nhọrọ enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ nwere ọtụtụ ngwaọrụ chọrọ dezie a foto na nke kacha mma n'ụzọ.
16. Site kpakpando
Otu nke kasị mma gburugburu nke ga-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi results na-na akara na chọrọ nke oru ngo. Ọ bụ a isiokwu na nwekwara ike ahaziri mfe na-enweghị ihe ọ bụla nke.
17. Ihunanya ịhụnanya
Dị ka aha na-atụ aro a na isiokwu na-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma nke si iMovie na isiokwu anya n'ezie na ndị mara mma. Ọ na-emekwa n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe pụta na-eme enweghị ihe ọ bụla nke.
18. Red bilie isiokwu
Ọ bụ nanị isiokwu ahụ nke nwere ndị na-abụghị ọkachamara Outlook ma ka ọ na-ebudatara, arụnyere na otuto site na ọtụtụ n'ime ndị ọrụ n'ụwa nile ruru ya ọdịdị na imewe.
19. Uri ka Mama
Nke a isiokwu nwere ọtụtụ atụmatụ agbakwunyere nke-agaghị ekwe omume e dere ruru ka obere nkọwa ma ọ na-gwara ibudata a na isiokwu iji jide n'aka na ihe ahụ na-hụrụ ngwa ngwa.
20. Galactic oké ifufe
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na ọchịchịrị gburugburu ndị maka iMovie. Ọ na-eme n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe pụta na-eme enweghị ihe ọ bụla nke.
Esi iMovie gburugburu / ndebiri si iDVD
Na-esonụ bụ usoro a ga-etinyere na nke a na-eme ka n'aka na nsonaazụ kacha mma na akara na ihe ndị a chọrọ na-enwetara.
1. The iDVD bụ-oru iji malite usoro:
2. A ọhụrụ oru ngo a na-ahụ na-kere na ziri ezi akụkụ ruru:
3. Onye ọrụ mgbe ahụ mkpa ijide n'aka na na ezi isiokwu na-arụ ọrụ maka iDVD:
4. The isiokwu bụ mgbe ahụ na-ahaziri n'ihu n'ihu:
5. The map button a na-ahụ na-enwe na-eme ka n'aka na video ọdịnaya exported:
6. The usoro na bụ ọzọ ga-esochi bụ File> Chekwa ka disk oyiyi:
7. The usoro ga-amalite na ga-ele anya dị ka DVD ọkụ:
8. The Video_TS faịlụ bụ mgbe ahụ ka a ga-enweta:
9. Site URL http://www.squared5.com/ na convertor bụ ike ibudata na-eme ka n'aka na video_TS faịlụ a converted .DV faịlụ ndọtị na a ga-rụchaa usoro dị ka nke a DV faịlụ nwere ike mfe ike ịtọ dị ka a isiokwu iMovie:
> Resource> iMovie> Top 20 iMovie gburugburu / ndebiri maka Mac ọrụ